Amaphuzu amahhala e-Kaizer Chiefs ne-Sundowns kwi-CAF | Scrolla Izindaba
Amaphuzu amahhala e-Kaizer Chiefs ne-Sundowns kwi-CAF
Amaqembu amabili I-Kaizer Chiefs ne-Mamelodi Sundowns anganikezwa amaphuzu amathathu ngaphandle kokukhahlela ibhola emidlalweni yawo ye-CAF Champions League.
NgoMgqibelo, i-African Football Body, i-CAF inikeze iqembu lase-Morocco i-Wydad Casablanca nejezi lase-Algeria i-CR Belouizdad kuze kube phakathi kwamabili ngeSonto ukuhlinzeka ngezinye izindawo lapho okuzodlala khona amaqembu aseNingizimu Afrika.
Ukwehluleka ukwenza lokhu kuzoholela ekutheni amaqembu amabili akuleli anqobe ngamagoli amabili eqandeni
Lezi zindaba zifike ngemuva kokhishwa kwemidlalo yomibili, obekuzokwenza i-Chiefs ihambele e-Morocco kuthi i-Sundowns iye e-Algeria, yamiswa njengoba womabili amaqembu enqatshelwa ama-visa okuhamba lawo mazwe ngenxa yezinkinga ezihlobene ne-Covid-19.
NgoMgqibelo, i-CAF ibize umhlangano ophuthumayo nawo womathathu amaqembu aseNingizimu Afrika abambe iqhaza emincintiswaneni ye-CAF (i-Chiefs, i-Sundowns ne-Orlando Pirates) ngokubambisana ne-Safa ukudingida indlela eya phambili.
I-CAF yabe isithatha isinqumo sokuthi i-Wydad ne-Belouizdad kufanele banikeze izindawo ezingathathi hlangothi emidlalweni yabo abazodlala kuyo ne-Chiefs ne-Sundowns.
Isitatimende esikhishwe yi-CAF ngoMgqibelo ntambama sifundeka kanje: “I-CAF inikeze i-Wydad Casablanca ne-CR Belouizdad kuze kube kusasa (ngeSonto) ebusuku ukuthi bathole indawo engathathi hlangothi lapho bezodlsla khona kwi-CAFCL ne-Kaizer Chiefs ne-Mamelodi Sundowns. Uma bengakwenzi lokho, imidlalo izothathwa njengokunqotshwa ngamagoli amabili eqandeni. Ukubala kuyaqala manje.”
Umdlalo we-Chiefs ekuhambeni kwi-Wydad ku-Group C bekufanele ukuthi udlalwe ngoMgqibelo odlule kodwa wahlehliswa yi-CAF ngemuva kokuthi Amakhosi enqatshelwe ama-visa yiziphathimandla zase-Morocco.
I-Sundowns nayo kudingeke ukuthi imise uhambo lwayo lomdlalo wayo ka-Group B ne-Belouizdad ngoMgqibelo.
Ekuqaleni iziphathimandla zase-Algeria zinikeze abantu base-Brazil ama-visa kodwa batshelwa ngoLwesine besendleleni ebheke esikhumulweni sezindiza i-OR Tambo ukuthi isimo sesishintshile ngenxa yeminye imikhawulo yezempilo.
I-Sundowns vele isiwudlalile umdlalo wayo wokuqala ku-Group B e-Loftus Stadium ne-Al-Hilal yase-Sudan.
Inqobe lowo mdlalo ngamagoli amabili eqandeni. Ngakolunye uhlangothi Amakhosi awakawuqali umkhankaso wawo wokuqala weqoqo le-Champions League.
Uma izimbangi zabo zase-Morocco zehluleka ukunikeza indawo engathathi hlangothi ngeSonto bangazibona bethola amaphuzu aphezulu ngaphandle kokukhahlela ibhola.